DAAWO:-Gudoomiye Sanyare oo lacag badan u balan qaaday cidii soo disha Cali dheere | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Gudoomiye Sanyare oo lacag badan u balan qaaday cidii soo disha Cali...
DAAWO:-Gudoomiye Sanyare oo lacag badan u balan qaaday cidii soo disha Cali dheere
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Sanyare ayaa abaal marin lacageed u balan qaaday cidii soo dishaa Afhayeenka guud ee Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere).
Sanyare oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayuu ku balan qaaday in lacag gaareysa $500,000 (Shan boqol oo ku dhon oo doolar) uu siinayo cidii soo disha Afhayeenka Al Shabaab.
Waxa uu sheegay in Cali Dheere dhibaato badan dalka ka geestay, waxa uuna cadeeyay in uu mudan yahay in la dilo isagoona Madaxiisa dul dhigay lacag badan uu siinayo cidii soo dishaa.
Balanqaadka uu sameeyay Gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa kusoo aadaya xili dhawaan Afhayeenka Al Shabaab Sheekh Cali Dheere ku baaqay in la dilo Gudoomiyaha gobolka Mudug Sanyare uu ku eedeeyay in uu diinta u gefay.
Previous articleDAAWO:-Malaaq Cali sababrka haduu nagadhamaado qax ayaa bilaabanayo
Next articleGuddoomiyihii degmada HODAN oo Muqdisho lagu dilay
Yaa kuguulaystay shirkii Muqdisho ?
DAAWO:- SHIIKH XASAN DAHIR AWEYS OO DIFAACAY WADAADA AHLU SUNNA...